काठमाडौँ उपत्यकामा थप ३९६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा थप ३९६ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा थप २३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका १९९ जना, १४ भक्तपुरका जना र १९ ललितपुरका जना रहेका छन् ।
निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन उपत्यकाका सडकमा करिब ५ हजार सुरक्षाकर्मी खटाइए
काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जारी गरिएको निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन उपत्यकाका सडकमा करिब ५ हजार सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका तीनै जिल्लामा गरी निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका करिब ५ हजार सुरक्षाकर्मी खटाइएको हो ।
काठमाडौँमा कति पुगे कोरोना संक्रमित ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा उपत्यकामा थप २०५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । काठमाडौँमा १३८ जना, ललितपुरमा ५० जना र भक्तपुरमा १७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
उपत्यकामा कोरोना सन्त्रास, सरकारी सेवाहरू तीन साताका लागि बन्द
ललितपुर । काठमाडौं उपत्यकामै कोरोना संक्रमणले सन्त्रास बढाएको छ । उपत्यकामा हालसम्म १ हजार १ सय ७९ जना संक्रमित भेटिएका छन् भने नौ जनाको मृत्यु भएको छ । उपत्यकामा संक्रमणको सन्त्रास बढेसँगै यहाँका सबै महानगरपालिका र नगरपालिकाले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा तीन साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा थप ४४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकामा थप ४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौमा ३६, ललितपुरमा ४ र भक्तपुरमा ४ जना रहेका छन् ।
फेला परेका अधिकांश सङ्क्रमितको यात्रा विवरण उपत्यका बाहिर देखिँदैन
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना महामारीको जोखिम प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । शुक्रबार र शनिबार फेला परेका अधिकांश सङ्क्रमितको यात्रा विवरण उपत्यका बाहिर देखिँदैन ।
काठमाडौँ उपत्यकामा थप ९२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा थप ९२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
काठमाडौँ । तराईका केही जिल्लासँगै काठमाडौँ उपत्यका कोभिड–१९ का हिसाबले उच्च जोखिममा परेको छ । काठमाडौँमा दैनिकजसो नै सङ्क्रमणदर बढ्दो रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।